Global Voices teny Malagasy » Nepal: Mirehitra i Madhesh · Global Voices teny Malagasy » Print
Nepal: Mirehitra i Madhesh
Voadika ny 24 Avrily 2019 6:38 GMT 1	 · Mpanoratra Paramendra Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsimo, Nepal, Ady & Fifandirana, Fampandrosoana, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Foko sy Fiaviana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Janoary 2007)
Lemaka ao atsimon'i Nepal i Madhesh , toerana ipetrahan'ny antsasaky ny mponina ao amin'ny firenena. Madhesi no fiantso ny olona avy any Nepal, efa ho ny antsasany mihitsy. Efa taonjato maro ireo Madhesi no natao anjorom-bala. Ao anaty fitroarana izy ireo ankehitrin, izay tsapa ho toy ny ampahany faharoa eto amin'izao tontolo izao manetsika ny Revolisiônan'y Aprily .
Efa ho herinandro iray mahery izao, nisongadina i Madhesh. Nohidiana izy. Apetraka isanandro ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina any amin'ireo tanàndehibe maro ao Madhesh. Ity ampahany amin'ny tolona ity dia natomboky ny Madhesi Janadhikar Forum (MJF). Efa an-taona maro ny MJF no fitaovam-piasàna kely. Vetivety izy dia nahazo laza tamin'ny alàlan'ireo hetsika am-pilaminana, ary toa an-dàlana ny ho lasa antoko pôlitika.
Niresaka momba azy io ireo Nepaley bilaogera, arakaraky ny hoe Pahadi ve ry zareo, sa Nepaley avy any an-tampon-kavoana, na Madhesi. Ireo Pahadi bilaogera toa maneho ny fitanilàn-dry zareo ary mety zara raha hitatitra ny endri-javatra sasany. Toa lasa mahaliana mihitsy aza izy ity noho ny fampielezankevitry ny governemanta milaza fa tsy hetsika fitakiana ny rariny ara-tsosialy izy io fa famporisihana ataon'ireo mpiandany amin'ny mpanjaka sy ireo Hindoa mpankamamy fahamboniana.
Manana lahatsoratra momba ireo endrika isankarazany amin'ilay hetsika ny “Madhesi – United We Stand” . Avy amin'ny lahatsoratra iray mitondra lohateny hoe Madhesi Murmurings .
Raha ampahany ao anatin'i Nepal i Madhesh, dia nahoana ireo Madheshis no tsy omena vintana ho afaka manaporofo ny fitiavan-dry zareo ny tanindrazany amin'ny fidirana ho miaramila Nepaley, izay andrim-panjakana tena fanehoana ny fitiavan-tanindrazana ao amin'ny firenena? Araka izay nomarihan'ny Praiminisitra Nepaley teo aloha, tsy mety amin'ireo Madheshis ny hanao miaramila satria samy tsy ananany ny fahasalamana sy ny tsanganana. Raha marina io filazàna io, miatrika ‘hanoanana miafina’ i Madhesh (lazaina ho vary iray lovia) (tohana ara-tsakafo noho ny tsy fahampiana) ary mila fiahiana ara-tsakafo sy ara-pahasalamàna avy amin'ny governemanta ao Nepal.
Hatreto, naka sisiny ihany koa tsy miditra lalina amin'ilay hetsika ireo mpilaza vaovao mahazatra erantany. Teny rehetra teny nanerana ny Revolisionan'ny Aprily  ny Global MSM. Tany anaty TV tao New York City izy, teny amin'ny pejy voalohan'ny New York Times nandritra ny andro maro. Na izany aza, toa tsy misy afa-tsy havoana sy tendrombohitra no sary ahafantaran'ny Global MSM an'i Nepal, raha tsy izany dia mety mba ho nampifantoka tsara ny sainy bebe kokoa izy ankehitriny.
Fanirian'ny DFN  ny ho lasa fitaovana politika bebe kokoa fa tsy ho bilaogy fotsiny. (afaka idirana amin'ny alàlan'ny anaran-tsehatra iray ihany koa izao ilay bilaogy: Madhesi.net ). Fanontaniana iray iankinan'ny ain-dehibe  no apetraky ny DFN izay manantena ny hitrandraka ny fihetsik'ireo Pahadis, sy raha toa ny hetsik'ireo Madhesi ka mitovitovy amin'ilay hetsika nitakiana demaokrasia tamin'ny Aprily 2006 .
Miresaka ilay olana ihany koa ny United We Blog . Misy sary lafatra  vitsivitsy avy amin'ireo hetsika, ahafahana manana topimaso tsy fahita firy momba ny korontana lalovan'i Madesh. Misy fifanakalozandresaka mivaivay any anatin'ireo habaka natao ho fanehoankevitra amin'io lahatsoratra io , satria resahan'ny olona ao ny momba ilay tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina napetraka ao amin'ny faritra.
Zoro somary mitanila no ijeren'i Mero Sansar ilay olana. Manana lahatsoratra iray i Parivartan Nepal  izay mamintina ny toedraharaha.
Azo takarina tsotra ny tanjona voalohany napetraky ny hetsik'ireo Madhesi. Tian'izy ireo ahilika ireo fifanarahana politika fahiny nataon'ny governemanta niainga tamin'ireo fotokevitra sy fomba fanaon'ny fanjanahana avy ao anatiny. Ankehitriny, rafitra fitantanana mizaka tena an'ny Madhesi no tian'izy ireo hisy, rafitra federaly sy fisoloantena mifandanja, ka isan'izany ny any anatin'ny fifidianana ny antenimiera mpanorina. Tsotra fotsiny, mitaky fitsinjarana fahefana tsy mitanila ry zareo.
Topazan'i Counterpoint maso ny ao India mpifanolo-bodirindrina aminy mba hahafantarana momba ny federalisma.
Asehon'ity fampitahana ity mazava tsara fa tsy tafavoaka velona ny federalisma raha toa ka miainga fostiny amin'ny resaka famaritana ny demaokrasia sy ny fananana vintana mitovy. Amin'izao fotoana izao isika afaka mahita Indiana maro avy any atsimo mandeha miasa any avaratr'i India, ary Indiana maro avy any avaratra mandeha miasa any atsimon'i India. Miaraka amin'ny fizakantena, manana ny maripamantarana azy manokana koa ny olona, ary io no nampitsahatra ny fifandirana tsy misy ilàna azy momba ny zo ara-politikan'ny olona iray.
Maneho ahiahy i Ajay Dhakal, toa an'i Blogger Nepal rahateo. Counterpoint  manana lahatsoratra iray nosoratan'ilay mpitarika mpianatra Gagan Thapa  momba io olana io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/24/137722/
 Revolisiônan'y Aprily: http://democracyforum.blogspot.com/2006/04/first-major-revolution-of-21st-century.html
 Madhesi Murmurings: http://madhesi.wordpress.com/2007/01/27/madheshi-murmurings/
 Revolisionan'ny Aprily: http://en.wikipedia.org/wiki/2006_democracy_movement_in_Nepal
 Fanontaniana iray iankinan'ny ain-dehibe: http://demrepubnepal.blogspot.com/2007/01/why-are-pahadis-quiet.html
 mitovitovy amin'ilay hetsika nitakiana demaokrasia tamin'ny Aprily 2006: http://demrepubnepal.blogspot.com/2007/01/madhesi-movement-is-april-revolution.html
 United We Blog: http://www.blog.com.np/
 sary lafatra: http://www.blog.com.np/united-we-blog/2007/01/29/nepal-terai-tension-protests-continue-media-targeted/
 fifanakalozandresaka mivaivay any anatin'ireo habaka natao ho fanehoankevitra amin'io lahatsoratra io: http://www.blog.com.np/united-we-blog/2007/01/27/tension-in-terai-protest-and-curfew-continue/
 Parivartan Nepal: http://parivartannepal.blogspot.com/2007/01/burning-madhesh-bleeding-madhesis.html
 Gagan Thapa: https://fr.wikipedia.org/wiki/Gagan_Thapa